Ku masrax jilayaashaaga wejigaaga adoo adeegsanaya Adobe Character Animator | Abuurista khadka tooska ah
Adobe Character Animator wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku noolaan karto wajigaaga
Animation-ka loo yaqaan 'Classic animation', oo lahaa jilaayaasheeda ugu waaweyn Disney iyo Warner, lafteeda ayaa ahayd oo waa geedi socod aad u hawl badan sida loox kasta u leeyahay in la sawiro dhowr ka mid ah oo ka koobnaan kara ilbiriqsi kasta oo ka mid ah, tusaale ahaan, gaaban 5 daqiiqo. Shaqo horay loo farsameeyay oo dib loogu soo celiyay 3D animation sidaa darteed isbeddel maalmahan iyo inaad sare u qaaddo barnaamijyada sida Photoshop, Maya ama 3DMax.
Haddayba ahayd waqtigaas animators-ku waxay ahayd inay muraayad ka eegaan si ay u helaan tilmaamaha wajiyada ee kala duwan si aad ugu geyso jilayaasha firfircoon, oo leh qalab Adobe cusub oo loo yaqaan 'Character Animator' shaygu wuu sahlanaan doonaa weligiis, maxaa yeelay waxaan u isticmaali karnaa wajigeena inaan ku abuuri karno dabeecad.
Barnaamijkan cusub ee Adobe wuxuu kuu ogolaanayaa inaad maamusho oo aad nooleysid xarfaha 2D adoo adeegsanaya makarafoon, kamarad kuu gaar ah iyo wejigaaga. Mar dambe lagama maarmaan noqon doonto in la isticmaalo qasabadaha kala duwan ee barnaamijka naqshadeynta si loo abuuro farshaxanka firfircoonida wejiga dabeecad firfircoon.
Adobe Character Animator waa abuurka ugu dambeeyay ee ku biiraya suugaanta 'Creative Cloud' waxaana loo heli doonaa sida muuqaalka muuqaalka ah dhowaan. Softiweerku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad lasocoto dhamaan dhaqdhaqaaqyada madaxa iyo muuqaalka wajiga, oo ay kujiraan libiqsiga, dhaqdhaqaaqa suniyaha, ama indhaha, si isla markiiba loogu soo saaro iyaga oo isugu jira lakabyo lagu sameeyay Photoshop ama Sawirqaade. Lakabyada waa la magacaabi karaa si ay u muujiyaan qeybta wajiga ay u dhigmaan. markaa xitaa way fududaan doontaa.
Barnaamijku wuxuu falanqeyn karaa codka si curiso iskudhis bushimaha, muuqaal laga heli karo barnaamijyada tartamaya sida barnaamijyada Toon Boom.
Adobe wuxuu rabaa barnaamijkan waxay ka caawin doontaa fanaaniinta laylisyada doonaya inay abuuraan animations-ka jilahooda iyo xirfadlayaal badan oo doonaya inay abuuraan jilayaal isku dhafan adigoon isticmaalin tibaaxaha ugu murugsan ee Raadinta Kadib. Barnaamijku wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku darto tiro wanaagsan oo toos ah oo toos ah adigoo kuu oggolaanaya inaad qaybaha kale ku maamusho kiiboodhka ama jiirka, marka laga reebo xaqiiqda ah in la badbaadin karo oo wax laga beddeli karo markasta oo aad rabto.
Calaamadaha 'Character' ee Adobe Character wuxuu imaan doonaa cusbooneysiinta soo socota ee After Effects CC.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Adobe Character Animator wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku noolaan karto wajigaaga
Gaar ah: Markii ugu horreysay ee farshaxanka
Moodada astaamaha toosan: Isugeynta 40 soo jeedin dhiirigalin ah